ဂျာနယ်၊သတင်းစာများ တစ်နေရာတည်းမှာဒေါင်းရန် | အိမ့်မှူးသော်
အဘယ်ကြောင့် windows ခေါ်သနည်း
အပျင်းပြေ SimSimi လေးနဲ့စကားပြောရအောင်
ကွန်ပျူတာမှာ Folder တွေကို New Tab နဲ့ ဖွင့်ရအောင်...
Copy to/Move to ကို Right click menu မှာထည့်မယ်
အမေရိကန် သားသမီး သွန်သင်ဆုံးမ နည်းစနစ်
အစစ်လား ၊ အတုလား ပြောပေးပါ
Facebook မှာ သိပ် မလန်းနဲ့
widows 8 အသုံးပြုရခြင်းအကြောင်း နှင့် ISO ဖိုင်ဒေါ...
My computer show on desktop in windows 8
မင်းသဘော( မူရင်း MTV)
Windows 8 မှာ snipping tool အသုံးပြုခြင်း
Realtek For windows 8
Windows 8 ကို password ပေးမယ်
minus.com မှဒေါင်းမရသောလင့်များ ပြောပေးပါ
PDF ဖိုင် ဖတ်ရန် softwares များ
ကွန်ပျူတာမှာ မိုက်ခဲမယ် (karaoke)
Facebook game request ကြောင့်စိတ်ညစ်နေသလား
Video Pad Editor Pro 2.40
ရွှေတိဂုံ ဘုရားပေါ်မှာ အင်တာနက် သုံးလို့ရပြီ
အိန္ဒိယကမ်းခြေမှ သေဆုံးနေသော ရေသူမ
ကြယ်ကလေးတို့ရဲ့ ဂီတမိုးကောင်းကင် ဖိုင်နယ်
ကျွန်တော် ဒီတစ်ခါတော့ သတင်းစာတွေ ၊ ဂျာတယ်တွေ၊ နည်းပညာဂျာနယ် တွေကို တစ်နေရာတည်းမှာ ဒေါင်းလော့ ချဖို့ စုစည်းထားတဲ့ website လေးတစ်ခုကို ညွှန်းချင်ပါတယ်။ တော်တော်လည်းစုံပါတယ်။ မြန်မာ ဂျာနယ်များ ၊ သတင်းများကို အပင်ပန်းခံပြီး လိုက်ရှာ ဒေါင်းစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော် အဲဒီဆိုက်လေး တွေ့ပြီးကတည်းက ဘယ်မှမရှာတော့ဘူး အဲဒီဆိုက်ကနေပဲ ဒေါင်းလော့ချပြီးဖတ်တော့တယ်။ အပတ်စဉ် ဖတ်စရာတွေကလည်း အများကြီးပဲ ။ အကုန်မဖတ်နိုင်လို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့ နည်းပညာဂျာနယ်လေးတွေပဲ ဒေါင်းပြီးဖတ်နေတယ်။ အွန်ုလိုင်းမှာဖတ်လို့မရဘူးနော်။ ဒေါင်းပြီးဖတ်ရမှာ။ တကယ်လို့ပေါ့နော် ....ဒေါင်းလော့ချလို့ အဆင်မပြေဘူး အွန်လိုင်းမှာဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ကိုပြောပေးပါ။ ကျွန်တော် အွန်လိုင်းမှာဖတ်လို့ရအောင် ပြန်တင်ပေးပါ့မယ် ။ အဆင်ပြေအောင်လို့ပါ။ ဖတ်ချင်တဲ့ ဂျာနယ်လေးသာ ကွန်မန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ မေးလ်ထဲကို အွန်လိုင်းကနေဖတ်လို့ရမယ့် လင့်လေး ပို့ပေးပါ့မယ်။ တော်တော်ကိုစုံတာနော်။
ချိုးငှက် 12:28 PM
အွန်လိုင်းမှာဖတ်ချင်တယ်...အပန်းမကြီးဘူးဆိုရင်တော့ အွန်လိုင်းမှာ ဖတ်လို့ရရင် အကောင်းဆုံး ဖြစ်မှာ....
အိမ့်မှူးသော် 1:27 PM
ဟုတ်ကဲ့ ဖတ်ချင်တဲ့ ဂျာနယ်ကို ပြောပါ.....gmail ပြောခဲ့ပေးပါ...
I actually like what you have acquired here, certainly like what you're saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it wise. I can not wait to read much more from you. This is actuallyaterrific site.